Berlin - Manolora dia amin'ny sidina 80 euro + trano fandraisam-bahiny | Vaovao momba ny dia
Rehefa atolotra izany tolotra izany dia tsy afaka mandà isika. Mandany ny ampahany amin'ny fiainantsika te-hitsangatsangana, fa tsy mila mandratra paosy. Ka nahita hevitra tsara ho anao izahay. Momba ny a dia roa andro mankany Berlin, izay azonao zaraina amin'ny namana sy mihoatra ny 80 euro fotsiny. Liana ve ianao Tsindrio eto ary araho izao fifanekena manokana izao izay haharitra ora vitsivitsy monja.
Toa mifanentana tsara daholo ny zava-drehetra. Toerana iray tena manokana, afaka mandray ny namantsika na ny mpiara-miasa amintsika ary mazava ho azy, ny vidiny farany lehibe. Satria izy io dia hahitana ny sidina tenany sy ny fijanonana. Rehefa ny tombony rehetra dia tsy maintsy mandeha manangona entana fotsiny isika.
1 Flight + hostel any Berlin amin'ny vidiny tsy hita lany
2 Mahita an'i Berlin afaka 2 andro miaraka amin'ireo mpitari-dalana anay
Flight + hostel any Berlin amin'ny vidiny tsy hita lany
Araka ny nasongadinay, dia miatrika tolo-tanana tsara isika, tsy misy isalasalana. Satria ankoatry ny efa nampidirina ny tapakila mandroso sy miverina, misy ihany koa ny fijanonana telo alina. Izany rehetra izany dia mitentina 87 euro, raha faritana. Noho izany, fotoana tsara hanararaotana sy hanomezantsika ny tenantsika izay izay noeritreretintsika hatry ny ela. Ho fanampin'izay, ho afaka hahafantatra an'i Berlin isika ao anatin'ny roa andro sy kely fa ho ao anatiny isika.
> Fandehanana sidina + trano fandraisam-bahiny any Berlin amin'ny 87 € fotsiny
Mandehana any amin'ny tolotra
Hanombohana, ny Hiainga ny talata 12 martsa ary hiverina ny zoma 15. Hiainga avy any Madrid amin'ny sidina mivantana mankany amin'ny toerana alehantsika isika. Raha vantany vao tonga dia manodidina ny 12 kilometatra ny hotely. Saingy tsy misy tokony hatahorana satria tsindrio eto raha afaka manofa famindrana avy amin'ny seranam-piara-manidina mankany amin'ny hotely ianao amin'ny vidiny mety indrindra sy amin'ny fiantohana rehetra.
Ho fanampin'izay, satria fohy ny fijanonany, dia hitondra valizy kely dia kely izahay ary tsy hanakana anay tsy hijanona izany.
Ilay hotely dia ny 'Days Inn Berlin City South'. Misy kintana telo ary havaozina tanteraka ao anatiny. Tena akaiky azy io, dia hahita ny faritra fialamboly na fiainana amin'ny alina ianao. Satria ao amin'ny Neukölln manodidina. Avy any, isaky ny miakatra hisakafo maraina ianao dia afaka mahita ny fomba fijery tsara indrindra eto an-tanàna. Fahafinaretana izay, amin'ity tranga ity, ananantsika ao anaty paosintsika.
Efa resy lahatra ny tenanao ve ianao ary te-hitahiry ve ianao?? Azonao atao izany izao Farany farany amin'ny fipihana eto
Mahita an'i Berlin afaka 2 andro miaraka amin'ireo mpitari-dalana anay
Mety tsy ho ela loatra ny mahita tanàna toy izao, saingy noho ny toro-hevitra omenay dia afaka manararaotra ny andronao ianao ka ny roa andro ijanonanao dia tsara tahaka ny efatra. Tsy misy isalasalana, ny fomba tsara indrindra hahitana ny tanàna ao anatin'ny roa andro dia manakarama fitsangatsanganana amin'ny fiteny Espaniola. Misy safidy maro, koa mba hanampiana anao kely amin'ny safidy, etsy ambany dia manolotra anao ny lisitry ny torolàlana natolotra izay tena tian'ireo mpamaky anay:
Fitsidihana an'i Berlin (4h). Fifanarahana amin'ny alàlan'ny fanindriana eto
Fitsidihana labiera any Berlin (3h). Fifanarahana amin'ny alàlan'ny fanindriana eto
Fitsidihana manokana an'i Berlin (4-6h). Ny safidy tsara indrindra ho an'ny vondrona ary inona afaka manao fifanarahana ianao amin'ny fipihana eto.
Raha ny fahitana ny tanàna, ny iray amin'ireo toerana tsy ampoizinao dia ho hita raha vao tonga any Berlin ianao: ny Vavahady Brandenburg. Io no vavahady taloha mankany Berlin, notokanana tamin'ny 1791 izy ary manome voninahitra lehibe ny fandriam-pahalemana.
Aorian'ny avelanao any ambadiky ny varavarana dia afaka mandeha hatrany amin'ny Parlemanta Alemanina ianao satria akaiky izany. Raha te hiditra ao dia ilaina ny manao famandrihana mialoha ka tsara indrindra alohan'ny dianao dia ataonao an-tserasera. Amin'ity tranga ity dia miatrika tranobe manan-tantara izay manana dome lehibe isika. Raha mahita ny lalana Ebertsbrasse ianao dia hitarika anao mankany amin'ny Fahatsiarovana Holocaust any Berlin. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ireo sakana maherin'ny 2.000 vita amin'ny beton. Ary indray, izany dia fanomezam-boninahitra ny Jiosy rehetra novonoina tany Eropa. Ny sisan'ny rindrin'i Berlin dia ampahany iray amin'ny tantara izay azonao vangiana ihany koa.
Tsy isalasalana fa ny ampitso dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny fitsidihana ny kianja malaza indrindra. Ny antso Alexanderplatz Io no iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra eto amin'ity tanàna ity. Eo no hahitanao ny Tilikambo fahitalavitra sy ny famantaranandro. Tsy mampaninona izany raha te handalina kely ny tantara ianao dia tsidiho ny tranombakoka sasany ary mijoroa amina fiantsenana kely. Mazava ho azy fa manonona kianja fizahan-tany isika, tsy lavitra aoriana ny arabe. Amin'izy rehetra dia asongadinay ilay fantatra amin'ny hoe Ku'Damm. Ho hitanao eo ny Fiangonana Fahatsiarovana an'i Kaiser Wilhelm.
Te hahita ve ianao? ny torolàlana sy ny hetsika rehetra misy any Berlin? Eto dia manana ny katalaoganao feno hankafy an'i Berlin amin'ny fahafenoany ary tsy mandany fotoana
Araka ny hitantsika, Berlin dia manolotra antsika fifangaroana tantara sy kolontsaina miaraka amin'ny ampahany hafa amin'ny fialantsasatra ary toy ny mpizahatany ihany. Zavatra izay azo atambatra tsara ao anatin'ny roa andro. Tsy mieritreritra ve ianao?
Mandehana amin'ny tolotra >> Flight + Hostel 2 andro any Berlin amin'ny 87 €
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Manolora dia ho any Berlin miaraka amin'ny namana: Flight + hostel amin'ny vidiny 80 euro